Huawei Band 6, smartband-ka ugu dhameystiran suuqa [Falanqaynta] | Wararka Gadget
Jijimado Smart ah iyo sidoo kale saacadaha casriga ah waa alaabooyin aad iyo aad ugu badan nolol maalmeedka. In kasta oo xaqiiqda ah in bilowgii jiilalka qalabkan ay u muuqatay in adeegsadayaashu ay ka cagajiidayaan shaqadooda iyo naqshadayntooda, xaqiiqadu waxay tahay in noocyada sida Huawei si weyn u sharad ku saabsan wearables natiijooyinkuna aad ayey u fiicnaayeen.
Waxaan si qoto dheer u falanqeyneynaa dhawaanahan Huawei Band 6, oo ah aalad leh ismaamul aad u weyn iyo astaamaha alaabta caymiska. Nala soo baro waxa khibradeenna u ahaa Huawei Band 6, xooggiisa iyo dabcan sidoo kale daciifnimadiisa.
1 Qalabka iyo naqshadeynta: Ka gudubka jijin fudud
3 Shaashadda weyn iyo ismaamulkeeda
Qalabka iyo naqshadeynta: Ka gudubka jijin fudud
Inkasta oo noocyada badankood ay ku sharfeen jijimooyin yaryar, oo leh naqshado aan muuqan oo waxaan dhihi karnaa ujeedo ah in la qariyo, Huawei waxay sameysay ka soo horjeedkeeda Band 6. Jijimadan la qiyaasayo waxay aad ugu dhowdahay inay toos u noqoto smartwatch labadaba shaashad, cabbir ahaan iyo naqshad u dambaysa. Xaqiiqdii, waxay si lama huraan ah noo xasuusinaysaa badeecad kale oo sumadda ka mid ah sida Huawei Watch Fit. Xaaladdan oo kale waxaan haysannaa badeecad fiican, oo leh badhan ku yaal dhinaca midig taasna waxaa lagu bixiyaa saddex nooc oo sanduuq ah: Dahab iyo Madow.
Ma jeceshahay Huawei Band? Qiimaha ayaa kaa yaabi doona bogagga iibka sida Amazon.
Cabirrada: X x 43 25,4 10,99 mm
Miisaanka: Gram 18
Cidhifyada waxyar baa la soo koobay, iyo waxyaabo kale oo laga doorbido adkaysi iyo adkeysi. Dabcan, kama helno godad sameecado ama makarafoon ku leh jijimadan, ma jiraan. Gadaal waxaa loogu talagalay labada biinanka lacag bixinta iyo dareemayaasha mas'uulka ka ah SpO2 iyo garaaca wadnaha. Shaashadu waxay ku jirtaa qayb badan oo ka mid ah hore waana shaki la'aan inuu yahay halyeeyada ugu muhiimsan ee naqshadeynta, taas oo ka dhigaysa badeecada mid aad ugu dhow smartwatch. Sida iska cad soosaarku waa balaastik sanduuqa, oo doorbidaya fudeydkiisa, si la mid ah sida xargaha looga sameeyo silikoon hypoallergenic.
Arrintan Huawei Band 6 Waxaan lahaan doonnaa seddex dareemayaal waaweyn, Accelerometer-ka, qalabka loo yaqaan 'gyroscope' iyo Huawei ee dareemayaasha garaaca wadnaha, TrueSeen 4.0 oo la isku dari doono si loo gaarsiiyo natiijooyinka SpO2. Dhinaceeda, isku xirnaanta waxaa lagu xiri doonaa Bluetooth 5.0 taas oo mabda 'ahaan noo soo bandhigtay natiijo wanaagsan oo ka timid gacanta Huawei P40 oo aan u isticmaalnay tijaabooyinka.
Waxaan leenahay iska caabin biyo aan si gaar ah u naqaano ilaalinta IP-ga iyo suurtagalnimada in aan ku quusinno ilaa 5 ATM. Batariga, waxaan leenahay 180 mAh wadar ahaan oo lagugu soo oogi doono adoo maraya dekedda ambalaaska ee ku jirta xirmada, sidaas maahan adapter ada, marka waa inaan ka faa'iideysanaa aaladaha kale ee aan guriga ku haysano. Huawei Band 6 wuxuu la jaan qaadi doonaa aaladaha iPhone-ka ee ka shaqeeya macruufka 9 iyo Android qaybtiisa lixaad. Ma lihin xirashada loo yaqaan 'iOS' sida la filan karo, waxaan leenahay Nidaamka Howlgalka ee shirkadda Aasiya oo sida caadiga ah si wanaagsan u qabata howlahan.
Shaashadda weyn iyo ismaamulkeeda
Shaashadu waxay qaadan doontaa nalalka oo dhan, waana taas la Huawei Band 6 ku dheji guddi 1,47-inji ah oo fadhiisan doona 64% xagga hore Gebi ahaanba marka la eego xogta farsamada, in kasta oo si daacadnimo ah, ay ugu wacan tahay qaabkeeda oo qalooca, dareenkayagu waa inuu qabsado xitaa weji ka sii badan, sidaa darteed waxay u muuqataa inay jirto shaqo naqshad guuleysan oo ka dambeysa. Tani waxay si toos ah ula tartameysaa tan isaga kan ugu weyn Huawei Watch Fit, oo shaashadiisu tahay 1,64 inji, sidoo kale qaab qaab leh. Ma garanayno heerka ilaalinta ee shaashadda ay leedahay, in kasta oo tijaabooyinkeennu ay u dhaqmeen sidii muraayad ku filan oo iska caabinta
Guddidan AMOLED waxay leedahay qaraar ah 194 x 368 pixelssy waxay leedahay heer sare oo dhalaal ah marka loo eego jijimooyinka tartanka sida caanka ah ee loo yaqaan 'Xiaomi Mi Band'. Sababtaas awgeed, shaashadda ayaa si muuqata loo arki karaa dharaar cad, in kasta oo ay ka maqan tahay dhalaalka tooska ah. Heerka seddexaad ee dhexdhexaadka ah wuxuu umuuqdaa mid u adeegi doona sidii xarago oo kale si uu awood ugu yeesho inuu si fudud u maareeyo isagoon si joogto ah u maareeyn karin dhalaalka sidoo kalena aan si weyn u dhaawicin baytariga.
Shaashadu waxay leedahay heer taabasho xasaasi ah oo si sax ah uga jawaabtay falanqaynta, matalaadda midabada sidoo kale waa mid wanaagsan, gaar ahaan haddii aan tixgelinno in qalabka loogu talagalay inuu ka laalaado curcurkayaga oo uusan ku raaxaysan filimada, waxaan ula jeedaa, dhererka midabada iyo waxyaalaha ka soo horjeeda ayaa si gaar ah u jecel akhriska macluumaadka ay Huawei Band 6 rabto inay na siiso mar walba. Shaashadu waxay umuuqataa mid kufiican isticmaalka maalin kasta.
Batarigu wax dhibaato ah ma noqon doono, in kasta oo 180 mAh ay annaga noo muuqdaan wax yar, Xaqiiqdu waxay tahay isticmaalka maalinlaha ah ee aan siinnay, Huawei Band ayaa awood u yeeshay na siiso 10 maalmood oo isticmaalka ah, taas waa lagu kordhin karaa ilaa 14 hadaad fuliso tabaha qaarkood ee aakhirka inaga hor istaagaya inaan ku raaxeysano qalabka.
Waxaan leenahay xakameyn tilmaam aasaasi ah:
Kor: Xarunta Ogeysiinta
Bidix ama midig: Mashiinno kala duwan iyo presets
Marka waxaan awoodi doonnaa inaan la falgalno aaladda, sidaas awgeedna u hagaajino dhalaalka, dhinacyada, qaabka habeenkii oo aan la tashanno macluumaadka. Waxaa ka mid ah codsiyada la rakibey:
Qalabka dareeraha oksijiinta
Saacadaha saacadaha, saacad, digniinta, tooshashka, raadinta iyo dejinta
Si daacadnimo ah, gabi ahaanba waxba kama seegi doonno jijimadan, inkasta oo aannu awoodi doonin inaannu kordhinno sidoo kale.
Ma ka filan karno howlo dheeri ah, waxaan leenahay jijin cabiran oo ku garaacda kuwa kula tartamaya qaabeynta iyo shaashadda qiimo dhan 59 euro oo ahSi daacadnimo ah, waxay iga dhigeysaa inaan meesha ka saaro dhammaan tartamada oo dhan. GPS waa la seegi karaa, waan cadeynayaa, laakiin macquul maaha in wax intaa ka yar la bixiyo. Suuqa smartband ee "raqiiska ah" gebi ahaanba waxaa rogay kooxdan Huawei Band.
Ku dhejiyay: May 30 ee 2021
Shaashad ballaaran oo tayo sare leh
Naqshad aan caadi ahayn
Is-maamul weyn iyo qiimo aad u hooseeya
Ma jiro GPS ku dhisan
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Huawei Band 6, waa smartband-ka ugu dhameystiran suuqa [Falanqaynta]